Bit By Bit - Fananganana fiaraha-miasa betsaka - 5.3.3 ataon'ny mpiara-to-patanty
Ny peer-to-patent dia antso an-telefaona izay manampy ireo mpandinika patanty hitady zavakanto efa nisy taloha; Asehony fa ny antso an-telefaona dia azo ampiasaina amin'ny olana izay tsy azo ovaina amin'ny famaritana.
Manana asa sarotra ny mpandinika ny paty. Mandray fepetra izy ireo, mamaritra ny fanoritsoritana momba ny fananganana vaovao, ary avy eo dia tsy maintsy manapa-kevitra raha toa ka "novelabelarina" ilay famolahana. Izany hoe, ny mpanadina dia tsy maintsy manapa-kevitra raha misy "zavakanto teo aloha" - io no voalaza etsy aloha. tsy misy valiny. Mba hahatakarana ny fomba fiasan'ity dingana ity, andeha hodinihintsika ny mpandinika paty antsoina hoe Albert, ho fanomezam-boninahitra an'i Albert Einstein izay nandefa ny biraon'ny Patent Patent tany Albert. Albert dia afaka mahazo fampiharana toy ny US Patent 20070118658 nalefan'i Hewlett Packard ho an'ny "User-selectable management alert format" ary nohazavaina be dia be tao amin'ny bokin'i Beth Noveck's Wiki-Wiki (2009) . Ity ny fangatahana voalohany avy amin'ny fangatahana:
Tokony hanome mari-pankasitrahana an-tanindrazana 20 taona ho an'ity patanty ity ve i Albert sa nisy namorona teo aloha? Ny tsatòka amin'ny fanapahan-kevitry ny patanty maro dia ambony, nefa indrisy, Albert dia tsy maintsy mandray io fanapahan-kevitra io amin'ny ankamaroan'ny fampahalalam-baovao ilainy. Noho ny famerenan-keloka goavana amin'ny patanty, i Albert dia miasa mandritra ny fotoana fanerena mafy ary tsy maintsy mametraka ny fanapahan-keviny mifototra amin'ny adiny 20 ora fotsiny. Ankoatr'izay, noho ny filàna ny fitazonana ny tsiambaratelo napetraka, i Albert dia tsy nahazo alalana hijery ireo manam-pahaizana manokana (Noveck 2006) .
Izany toe-javatra izany no nahatonga an'i Prof Nedck, mpampianatra lalàna, ho tapaka tanteraka. Tamin'ny jolay 2005, nanentana ny ampahany tamin'ny Wikipedia, izy dia namorona lahatsoratra bilaogy mitondra ny lohateny hoe "Taratasy ho an'ny Patent: Proposition modest" izay nangataka ny rafitra fanaraha-maso momba ny pataloha ho an'ny patanty. Taorian'ny fiaraha-miasa tamin'ny orinasa patanty sy marika amerikana Amerikana sy ny orinasan-tserasera toy ny IBM, ny Peer-to-Patent dia natomboka tamin'ny Jona 2007. Efa ho 200 taona ny biraon'ny governemanta sy vondrona mpisolo vava no toa tsy mety ny mitady fanavaozana, fa ny Peer-to-Patent dia manao asa mahafinaritra amin'ny fandoavana ny tombotsoan'ny tsirairay.
Figure 5.9: Workflow peer-to-patent. Bestor and Hamp (2010) tamin'ny Bestor and Hamp (2010) .
Ireto ny fomba fiasany (sary 5.9). Rehefa avy manaiky ny fampiharana ny fampiharana azy dia mandalo amin'ny famerenana ny fiarahamonina (misimisy kokoa ny antony anaovany izany amin'ny fotoana iray), dia navoaka tamin'ny tranonkala ny fangatahana. Avy eo, ny resadresaka dia resahin'ny mpandinika momba ny fiarahamonina (indray, bebe kokoa ny antony mety handraisan'izy ireo anjara amin'ny fotoana iray), ary misy ohatra azo fantarina momba ny zavakanto teo aloha, nalaina sy nakarina tamin'ny tranonkala iray. Ity dingam-pifanakalozan-kevitra ity, ny fikarohana sy ny fandefasana dia mitohy, hatramin'ny farany, ny mpikamban'ny mpandinika dia mifidy mba hifidy ireo top 10 fantina avy amin'ny zavakanto teo aloha izay nalefa any amin'ny mpanadin-patana ho an'ny famerenana. Ny mpandinika ny patentera dia mitarika ny fikarohana ataony ary miaraka amin'ny fampidirana avy amin'ny peer-to-patent dia manome fitsarana.
Andao hiverina any amin'ny patentan'ny US 20070118658 ho an'ny "User-selectable administrator alignement format". Io patanty io dia nakarin'ny peer-to-patent tamin'ny Jona 2007 izay novakian'i Steve Pearson, injeniera malaza amin'ny IBM. I Pearson dia nahafantatra io sehatry ny fikarohana io ary namaritra ny ampahany tamin'ny zavakanto teo aloha: boky fianarana iray avy amin'ny Intel mitondra ny lohateny hoe "Fitantanana ny fitantanana ara-teknolojia: Quick Reference Guide" izay navoaka roa taona talohan'izay. Niara-niasa tamin'ity antontan-taratasy ity, toy ny artista hafa sy ny adihevitra avy amin'ny vondrom-piarahamonin'ny Peer-to-Patent, ny mpandinika patanty iray dia nanomboka nanadihady lalina ilay raharaha ary farany dia nandroaka ny fangatahana fangatahana, ampahany noho ny boky Intel dia nalain'i Pearson (Noveck 2009) . Amin'ireo tranga miisa 66 izay nahavita ny antontan-taratasin'ny Peer-ny, efa ho 30% no nolavina voalohany noho ny zavakanto teo aloha hita tamin'ny alalan'ny Peer-to-Patent (Bestor and Hamp 2010) .
Ny antony mahatonga ny famolavolana ny peer-to-patentanina ho tena tsara dia ny fomba hahatonga azy ho olona manana tombotsoa mifanohitra amin'ny dihy miaraka. Ny mpikaroka dia manentana ny handray anjara satria ny biraon'ny patent dia mamerina haingana kokoa ny fangatahana peer-to-patantany noho ny patanty mandalo ny fizotran'ny fomba fijery nentim-paharazana. Ireo mpandinika dia manana fikasana handraisany anjara mba hisorohana ny fisian'ny paty ratsy, ary maro no toa mahita fa mahafinaritra ilay dingana. Farany, ny biraon'ny patanty sy ny mpandinika ny patanty dia manana fankaherezana handray anjara satria ny fomba fanao dia afaka manatsara ny valiny fotsiny. Izany hoe, raha mahita ireo karazan-tsakafo tsy mahomby folo ireo fomba fijerin'ny fiarahamonina, dia mety hohadinoin'ny mpandinika patanty ireo singa tsy mahasoa ireo. Amin'ny teny hafa, ny peer-to-patent sy ny mpandinika patanty dia tokony ho tsara na tsara kokoa noho ny mpandinika patanty miasa any ivelany. Noho izany, ireo antso misokatra dia tsy manolo ny manam-pahaizana foana; Indraindray dia manampy ny manam-pahaizana hanao ny asany izy ireo.
Na dia toa samy hafa noho ny loka Netflix sy ny Foldit aza ny peer-to-patent dia manana rafitra mitovy amin'izany izy ireo fa mora kokoa ny manamarina fa tsy mamokatra. Raha vantany vao namorona ny boky "Active Management Technology: Quick Reference Guide" ny olona iray, dia mora kokoa - ho an'ny mpandinika patanty, farafaharatsiny - hanamarina fa ity rakitra ity dia zavakanto teo aloha. Na izany aza dia sarotra be ny mahita izany boky izany. Ny peer-to-patent dia mampiseho ihany koa fa ny tetikasa antso an-telefaona dia azo atao na dia ho an'ireo olana izay tsy voamarina fa azo ampiasaina amin'ny fitomboana.